FreeAccess plus ! web 2.0 : ahafahana miala sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2008 8:16 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Português, عربي, Español, English
Niainga tamin’ny asan’i Hamed Saber momba ny “Access Flickr” fiitaranasan’ny Firefox, nahafahana niala tamin’ny fanatantavanana ampiharina any Iran sy firenena hafa tena vitsy izay manampina ny Flickr, vohikala malaza amin’ny fifampizarana sary, no namoahan’i MohammadR ny “FreeAccess Plus!“, Fiitaranasa (extension) nosainina lalina mamadika ny Firefox ho proxy (solon’adiresy fanangonana fa fandefasan-kafatra ?) ahafahana midify ny sivana mihatra amin’ny vohikala malazan’ny Web 2.0 tahaka ny YouTube, del.icio.us, Flickr, Technorati.com, FriendSter.com, livejournal.com, MySpace, Hi5 ary ny hafa ihany koa. Maro amin’ireo vohikala ireo manko no voasakana any Iran.
Faly dia faly amin’ny “FreeAccess Plus!” i MohammadR noho ny fanomezana anjara biriky vitany ho an’ny tontolom-bolongana Iranian. Ao amin’ny Balatarin (midika hoe “ny avo indrindra” amin’ny teny persiana) izay Digg amin'ny endrika Iraniana, olona 23 no nifidy tantara iray midera ny FreeAccess Plus! fiitaran’asa “nahavita fahagagana” (معجزه میکنید)“.
“Efa maro tamin’ny mpamaham-bolongana Persiana fantadaza no nanoratra momba ity fiitaran’asa ity talohan’ny fanolorana azy tao amin’ny vohikalan’ny “Mozilla Addons”,” hoy MohammadR tamin’ny Global Voices Advocacy. “Nandritra ny herinandro voalohany fotsiny dia efa notrohina in-150 ny FreeAccess Plus! Ankehitriny, iray volana taorian’ny nanolorana azy dia efa nihoatra ny in-3500 izy io no notrohina” hoy ny fanampim-panazavany.
Niteny i MohammadR fa mora dia mora ny mametaka ny FreeAccess Plus! “mankao amin’ny “https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6139“,fotsiny dia eo amin’ny fanambanin’ny takelaka ianao no manindry ny bokotra “Install Now”. Hisy takelaka iray hafa hipongatra hanontany anao raha hanantitra tokoa ny hametahana azy ianao, tsindrio indray ny “Install Now”. Marihina fa mila manomboka indray (restart) ny Firefox ianao mialoha ny hametahana ny fanitaran’asa.”
Apetaka fotsiny ny fanatsofoka (plugin) dia ahainga indray ny mpisafo (browser); ary dia hovitain’ny Firefox ny ambiny! Afaka miditra amin’ny Youtube, Flickr, MySpace ary ny vohikala voasoratra ao amin’ny takelaka add-ons ianao.
Tsy mbola zakan’ny “FreeAccess Plus!” ny safidy hanampy (vohikala hafa ?) ireo vohikala efa tafiditra lisitra. Nampanantena anefa i MohammedR, fa hampiana – ny lisitra azo ovaina sy azo anaovana bika – amin’ny fanavaozana manaraka.
Manantena i MohammedR fa hanampy ny mpiray tanindrazana aminy hanavatsava ny sivana mihatra amin’ny tranonkalam-piaraha-monina ny “FreeAccess Plus!”. “Maro amin’ny mpamaham-bolongana Iraniana no tsy faly amin’ny fanakanana tsy amin’ny antony ny Web 2.0 sy ny vohikala ara-tsosialy maro ” hoy ny nolazainy.
P.S: raha te-hahafantatra bebe kokoa ny momba ny sivana mihatra amin’ny web 2.0 sy ny fanoherana izany, aza fady vakio ny Access Denied Map. Henjana ihany koa ny nandikana ity tamin’ny teny malagasy koa asa raha azonareo ihany. Tsy dia sarotra loatra koa ny lahatsoratra nadika raha hamaky azy ianao, dia ahitsio izay hitanao mila ahitsy!